Madaxtooyada Cusub: Dhib Mise Dheef Ayay U Tahay Somaliland iyo Deegaanka Laga Dhisayo (Galbeedka Hargeysa)?Qalinkii Siciid Maxamud Gahayr
Madaxtooyada Cusub: Dhib Mise Dheef Ayay U Tahay Somaliland iyo Deegaanka Laga Dhisayo (Galbeedka Hargeysa)?
Dad badan ayaa odhan jiray “Waxa loo baahan yahay in la dhiso madaxtooyo cusub oo ka ballaadhan gurigii loogu talo-galay Taliyihii Qaybta 26aad ee Ciidanka Xoogga Dalka Soomaaliyeed” aqalkaas oo maanta ah Madaxtooyada Somaliland. Dad badan ayaa marka ay dan leeyihiin ugu yeedha “Gurigii Moorgan”. Sannadkii 1998kii ayuu nin mucaarid ku ahaa Marxuun Cigaal uu warqad u diray Maxamed Siciid Xirsi “Moorgan”, waxaanu ka codsaday in uu u soo wakiisho maamulka qasriga Somaliland, maadaama oo uu Moorgan oo lehi ku sugnaa Kismaayo.
Warqad wakaalad ayuu soo qoray, waxaanu ninkii ka hadlay Somaliland Space Channel, isaga oo Cigaal ku eedaynaya in uu xoog ku haysto guri uu wakiil ka yahay. Rag ayaa yidhi “Ma soo xidhnaa?”. Marxuun Cigaalna wuxuu yidhi “Faraha ka qaada”. Mar dambe oo 2014ka ayuu Moorgan qudhiisu caddeeyay in gurigaasi ahaa guri dawladeed, oo aanu gaar u lahayn. Miyaanay ahayn in mar uun laga nasto “Gurigii Moorgan ayaa dalka laga maamulaa”
Intii uu Madaxweyne Siilaanyo xilka hayay, waxa qasriga Somaliland lagu daray dhul uu ka mid yahay gurigii uu ku jiray Cabdillaahi Maxamed Ducaale Wasiirkii Hore ee Arrimaha Dibadda Somaliland, waxaanan qirayaa in la ballaadhiyay, la dayac-tiray, wax badanna quruxdeeda iyo qaabkeeda laga qabtay
Markii uu xilka qabtay Madaxweyne Muuse Biixi Cabdi waxa la galay sahan ah: halkee ayaa laga dhigaa Madaxtooyada, Guurtida iyo Wakiilalda? Waxa madaxtooyada loo qorsheeyay Galbeedka Hargeysa, halka guurtida iyo wakiillada loo qoondeeyay Bariga iyo Koonfurta Hargeysa. Ma filayaba in la helayo dhul laga dhiso Goleyaasha Guurtida iyo Wakiillada, waxa aan eegga ku koobnaan doonaa faallada dhismaha qasriga socda. Waxa aan qormadan se dhex raacinayaa suaal aan weydiinayo Duqa Caasimadda Hargeysa Md Abdirahman Mohamoud Aideed (Soltelco), oo aan leeyahay “Maayar ma qorshayseen dhulkii laga dhigayay xarumaha Guurtida iyo Wakiillada weli?. Adiga a-qaadkaas warbaahinta mariyay 2018ka?”.
Ma jirto taako dhul ah oo bannaani Somaliland, meel kasta qof, qoysas iyo ummad ayaa leh. Waxa ay noqotay in xukuumaddu awood ku muquuniso dadkii lahaa dhulka loo qoondeeyay madaxtooyada cusub. Waxa xoog iyo ciidan lagu qabtay dhul sharci leh oo muwaaddin leeyahay. Deyrkeeda waxa dhisay ciidanka, waana loo aammini waayay in shacab loo dhiibo ama ay taagaan. Dhawaan ayay ciidanka qaranku ku wareejiyeen Agaasimaha Guud ee Madaxtooyada Somalialnd Mohamed Ali Bile.
Nin aanu saaxiib nahay oo wade ka ah tagsi, isla markaan aan aqoon badan u lahayn magaalada ayaa habeen si habaw/ambad ah u galay Madaxtooyada cusub. Waxa ku soo kaakacay oo gacanta ku dhigay ciidankii waday. Wuxuu yidhi “Sidii la iigu tuntay iyo jugtii i gaadhay ma malayn kartid. Waa la i garaacay oo la i hadimeeyay”. Garo, waxan filayaa in la mooday uun dadkii dhulka lahaa.
Madaxtooyada cusub waxa loo qoondeeyay in laga dhiso 4km, dhan kasta waa 1km. Qiyaas ahaan cabbirkeedu waa 110 baloog. Baloog kastaa waa 10 baloodh/jago, sidaas awgeed ayay ugu fadhidaa meel ay ka dhismaan 1110 guri. Haddii aynu jago kasta ka soo qaadno in qiimaheedu yahay ugu yaraan $20,0000 waxa ay noqonaysaa $21,000,000 (kow iyo labaatan milyan oo dollar). Waxa sidoo kale la xannibay dhul ku wareegsan, kuwaas oo aan fooq laga dhigi karin. Dhulkaasi waa mid ka ballaadhan inta qasriga laga dhigayo, waxaana wadarta qiimihiisa lagu qiyaasay $30, 000, 000 (Soddon milyan oo dollar).
Sidaas awgeed qiimaha dhulka madaxtooyada loo qorsheeyay iyo jagooyinka xayiran ee ku xeeran waxa lagu qiyaasayaa $51,000, 000 (Kow iyo konton milyan oo dollar). Qiimayntani ma aha wax aan keligay iska sameeyay, waxa gorfeeyay oo aanu madal ku wada faaqidnay madal ay joogeen siyaasiyiin ay ka mid yihiin Aqoonyahan Jamal Ali Hussein, Axmed Cumar Xaaji Cabdillaahi (Xamarje) iyo masuuliyiin kale.
Dadka leh dhulka laga dhisayo madaxtooyadu waxa ay haystaan waraaqo sharci ah iyo xukunno maxkamadeed oo caddayn